केटीएमले नयाँ दुई बाइक सार्वजनिक गर्दै: कति पर्छ मूल्य ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > अटो > केटीएमले नयाँ दुई बाइक सार्वजनिक गर्दै: कति पर्छ मूल्य ?
केटीएमले नयाँ दुई बाइक सार्वजनिक गर्दै: कति पर्छ मूल्य ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा ड्यूक २०० बीएस ६ र ड्यूक २५० सार्वजनिक हुने भएको छ ।
केटीएमले सोमबार एकै दिन दुई नयाँ मोटरसाइकल सार्वजनिक गर्ने भएको हो । ड्यूक २०० बीएस ६ र ड्यूक २५० दुबै मोडल बीएस ६ इन्जिन सहित नेपाली बजारमा भित्र्याएको हो । यो सँगै नेपालमा बीएस सिक्स मोटरसाइकल भित्र्याउने केटीएम पहिलो कम्पनी बनेको छ ।
ड्यूक २५० मा २४८.८ सीसी सिगंल सिलिन्डर लिक्वीड कुल्ड एफआई इन्जिन दिइएको छ जसले २९.६ बीएच पावर तथा २४ एनएम टर्क जेनेरेट गर्छ । ६ स्पीड गियरबक्स रहेको यो बाइक नयाँ फिचर सहित नेपाली बजारमा प्रवेश पाएको छ ।
ड्यूक २०० मा १९९.५ सीसी सिंगल सिलिन्डर, एफआई, लिक्वीड कुल्ड इन्जिन युक्त छ जसले १०००० आरपीएममा २५ पीएस पावर तथा ८००० आरपीएममा १९‍.३ एनएमको टर्क जेनेरेट गर्छ ।
फुल डिजिटल कन्सोल, फुल एलइडी लाइट, गियर इन्डिकेटर, अलोय ह्वील, एबीएस, यूएसडी फर्क यी बाइको मुख्य बिशेषता रहेका छन् । मूल्य कम्पनिका अनुसार बीएस ६ ड्यूक २०० को मूल्य ५ लाख ४० हजार तोकिएको छ भने २५० को मूल्य ६ लाख ४० हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
२०७७ भदौ २९ गते ०७:५८ मा प्रकाशित
मेथानल मिश्रित स्यानिटाइजर त प्रयोग गर्नुभएको छैन ? ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ
सागमा नेपालले पायो पहिलो स्वर्ण
धमाधम बढ्दैछ सुनको भाउ, आज चाँदीको पनि भाउ बढ्यो
बम आक्रमणमा परी गभर्नरको मृत्यु !
चौमासिक प्रगति विवरण समिक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि विश्व बैंकसँग १३ अर्ब ६२ करोड ऋण